Mujaahidiinta Alshabaab Oo Ka Hadlay War Kasoo Baxay Dowlada Kenya. – Bogga Calamada.com
Mujaahidiinta Alshabaab Oo Ka Hadlay War Kasoo Baxay Dowlada Kenya.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayay uga hadashay sheegasho ka timid dowladda Nasaarada Kenya oo ku aadaneed in weerar dhanka cirka ah ay ku dishay tobaneeyo dagaalyahan.
Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab oo warbaahinta islaamiga ah la hadlay ayaa sheegay in haba yaraatee wax duqeyn ah oo lagu dilay ciidamo â€˜Mujaahidiintaâ€™ katirsan ay ka dhaceen deegaan ku dhow magaalada Badhaadhe.
“Mujaahidiintu waa nabad qabaan haba yaraatee wax duqeyn ah kama dhicin saldhig ay mujaahidiintu ku leeyihiin Badhaadhe ama Jubbooyinka, warka kasoo baxay dowladda saliibiyadda Kenya waa been abuur ay ku doonayso in ay niyadda ugu dhisto ciidankeeda mooral jabsan ee ku dhiig baxaya gudaha Soomaaliyaâ€ ayuu yiri Sheekh C/Caziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidanka Al Shabaab.
Warka kasoo baxay Xarakada Al Shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Kenya ay faafinta warkan beenta ah uga dan leedahay in ay ku qariso jabkii iyo hallaaggii kasoo gaaray dagaalkii bishii Janaayo ka dhacay deegaanka Kulbiyoow.
“Majiraan wax duqeymo ah oo diyaaradaha Kenya ugeysteen saldhigyada mujaahidiinta, waana sheegasho qeyb ka ah beenta ay caanka ku tahay dowladda Kenya” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheekh Abuu Muscab.
Dhinaca kale ilo wareedyo madax banaan oo lagasoo xigtay dad ku sugan degmada Badhaadhe waxay xaqiijinayaan in haba yaraatee aysan diyaaradaha dagaalka Kenya aysan duqeyn ka geysan meelo ay ku sugnaayeen ciidamada Al Shabaab.
Melleteriga Kenya ayaa warsaxaafadeed uu saaray 27 March, 2017 ku sheegay in 32 dagaalyahan ay ka dileen Al Shabaab.
Afhayeenada kala duwan ee dowladda Kenya ayaa taariikh madoow ku leh faafinta beenta iyadoo la ogyahay in Kenyaatigu ay sanaddii 2014 sheegeen in duqeyn ay ku dileen Sheekh Xasan Yacquub Cali iyo Sheekh Cali dheere oo kamid ah madaxda xarakada Al Shabaab.
xaqaani says 5 years ago
Hadhihin ayey xarakadu ugahadashay ee waxaad tiraahdaa ayay xarakadu ugahadleen hana dhihin xarakada sheegatay ee waxaad tiraahdaan xarakadu waxay sheegteen sidookale ha oronina xarakadu waxay dhishay ee waxaad tiraahdaan xarakadu waxay dileen!
Sidookale ha ororonina xarakadu waxay cuno kaqaybisay ee waxaad tiraahdaan xarakadu waxay cuno kaqaybiyeen waayo waxaa fiican in lagafogaado in la isticmaalo erey muujinaya tilmaam dumarnimo ama sife haween in lagutilmaamo ragg ragg dhalay